Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Nanokatra fananana marika roa an'ny UK ny Marriott International
Ny trano fandraisam-bahiny roa dia iasan'ny Cycas Hospitality, izay tamin'ny taona 2018 dia nanokatra ny fananana marika roa an'ny Marriott tany Eropa tamin'ny alàlan'ny marika Moxy sy Residence Inn any Amsterdam.
Ny trano fandraisam-bahiny indroa voalohany an'i Slough dia nanokatra ny varavarany androany telo volana mialoha ny fandaharam-potoana, lasa ny fotoana voalohany natambatry ny Marriott International marika hotely roa ambanin'ny tafo iray any UK.
Novolavola sy fananan'ny Slough Borough Council, ny hotely roa dia ampiasain'ny orinasam-pitantanana hotely manampahaizana manokana Cycas Hospitality, izay tamin'ny taona 2018 no nanokatra Marriottfananana manana marika roa voalohany any Eropa ao ambanin'ny marika Moxy sy Residence Inn any Amsterdam. Ny fampandrosoana dia natsangana tamin'ny alàlan'ny Slough Urban Renewal (SUR) - fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny filankevitra sy Morgan Sindall Investments Ltd.
Ny trano fandraisam-bahiny 244 misy efitrano fandraisam-bahiny dia ampahany amin'ny fampandrosoana lehibe manova ny tranomboky teo an-tanàna taloha, izay misy koa trano 64 vaovao sy trano fisakafoanana 4,000 sq.ft an'ny trano fisakafoanana sy fivarotana.
Mibodo ny rihana efatra ambany, ny Moxy Slough entin'ny fomba fiainana dia manolotra efitrano fandraisam-bahiny 152, ao anatin'izany ny efitrano kambana 28 sy valo azo idirana. Ho fanomezam-boninahitra ny fifandraisan'ny tanàna hatramin'ny fahitalavitra Thunderbirds malaza, nalaina sary an-tsary teo amin'ny Slough Trading Estate teo akaiky teo, ny haingon-trano tsara tarehy ao amin'ny hotely dia mampiditra sary an-tsary miavaka amin'ny rindrina sy sary famantarana fankalazana ny fampisehoana saribakoly Gerry & Sylvia Anderson ary lova eo an-toerana.
Miaraka amin'ny suites 92, Residence Inn by Marriott Slough dia natao mba hanomezana traikefa an-trano any an-trano bebe kokoa ireo vahiny maharitra, feno trano hipetrahana fanampiny sy lakozia feno fitaovana. Izy io no lasa fananana fanitarana marika maharitra voalohany any Slough sy ny manodidina azy, miaraka amin'ireo efitrano rihana fahasivy sy toerana malalaka ho an'ny besinimaro manolotra ny fijerin'ny lanitra London.
Na dia samy manana ny fidirana sy fandraisam-bahiny manokana aza ny hotely tsirairay, dia mamela ny vahiny sy ny fialam-boly hisafidy toerana sahaza indrindra ny filan'ny dia, ary mamporisika azy ireo hanararaotra ny toerana iombonan'ny hotely roa.
Wayne Androliakos, Lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Cycas Hospitality, dia nilaza hoe: "Fivoarana manamarika izany ho an'ny tanàna ary koa ireo mpiara-miombon'antoka rehetra voakasik'izany, ary faly izahay fa nanampy betsaka tamin'ny fitondrana marika fampiantranoana roa fanta-daza ho an'ny faritra.
“Miaraka amin'ny zavatra niainantsika tamin'ny famolavolana hotely misy dobo roa, fantatray ny tombony azo avy amin'ny fomba 'roa-in-iray' izay azon'ny mpandeha sy mpamandrika momba ny dia. Niova ho toerana mamirapiratra izao ilay tranomboky teo aloha, matoky izahay fa ny fanampiana marika hotely avo roa heny dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny mombamomba an'i Slough ary hampisy fiainana vaovao eo afovoan-tanàna. ”
Ny mpanolotsaina James Swindlehurst, mpitarika ny filankevitra Slough Borough ary mpikambana ao amin'ny kabinetra ho an'ny famerenana amin'ny laoniny sy paikady dia nilaza hoe: "" Na eo aza ny fanidiana sy ny fameperana mandritra ny taona 2020 dia nitohy ny asa fanamboarana ny tranokala Old Library amin'ity tetik'asa lehibe eto afovoan-tanàna ity, izay efa manomboka mahatsapa fa mari-toerana afovoan'ny tanàna miorina.
"Ny filankevitra dia nisafidy ny hampiditra tena amin'ity fampandrosoana ity satria fantany fa ho fananana maharitra amin'ny tanàna izany amin'ny famoronana asa ho an'ny mponina, manampy ny fahaizan'ny trano fandraisam-bahiny tena ilaina, ary ny fandefasana vola miditra azo antoka any amin'ny filankevitra avy amin'ny fampanofana izay hanampy amin'ny fanohanana ireo serivisy eo an-toerana amin'ny ho avy. Mahafinaritra ny mahita ity trano fandraisam-bahiny sy fampandrosoana tsy manam-paharoa eto afovoan-tanàna ity ary tsy ho ara-potoana ny fisokafany raha ny momba ny asa vaovao natolony teo an-toerana. ”
Ireo fananana roa ireo dia maneho ny voalohany amin'ny sivy nosokafan'ny Cycas Hospitality manerana an'i Eropa amin'ity taona ity.
Fifandraisana stratejika JD Technologie hanomezana rafi-dahatsary mandroso